vendredi, 19 janvier 2018 15:16
Morondava: Manome hasina ny tantara
Manana ny tantarany eto Menabe io hazo lehibe iray manoloana ny tranombarotra Farouk io. Teo no voalaza fa naharava ny nofon’Andriandahifotsy. Hofefen’ny Kaominina Morondava izy io ho fanandratana ny hasiny ary hatao vakoka sy hampahafantarina ny vahiny.
Nanotrona ny fanombohan’ny asa famefena androany ireo raiamandreny isany, Printsy Kamamy Magloire, Boana Idy, Simon victor, Kolo Rolland ary ny fikamban’ny mpanakanto aty Menabe.
Vakinankaratra: Miaro ny tontolo iainana ny mpitandro filaminana
Zanakazo maherin'ny 2220 fototra no novolen’ny mpitandro filaminana androany zoma 19 janoary, tamin'ny toerana samihafa dia ny tao amin'ny ACMIL sy ENSOA ary ny teny amin'ny Zandary Antanimenakely, ary tany Antandrokomby-Ambohidranandriana.
“Ankoatry ny fiarovana ny tontolo iainana dia ampiasain'ny miaramila ihany koa ny hazo”, hoy ny Kolonely Ralaibeza, Komandy lefitry ny Akademia miaramila.
vendredi, 19 janvier 2018 13:15
RN34: Nisokatra omaly hariva ny lalana
Nanamboarana fivilian-dalana vonjimaika mandrampahavita ny fanamboarana ny simba ao Ankazomiriotra, lalana nokaohin’ny rano nandritra ny rivodoza AVA. Vita, ary dia nisokatra omaly tamin’ny 6 ora hariva ny fivilian-dalana amin’ny lalam-pirenena faha-34 mampitohy an'i Morondava sy Antsirabe.
Nandatsahana kaontenera tao anaty lavaka, avy eo nototofana teo amboniny.
vendredi, 19 janvier 2018 11:57
Faritra Boeny: Zanakazo 25 000 voavoly nandritra ny fanokafana ny taom-pambolena
Teny amin'ny Kaominina Ambalakida no nanokafana ny taompam-bolen-kazo 2018 tato anatin'ny faritra Boeny. Ny maraina teo no nanaovana izany ka velaran-tany mirefy 20 hektara no norakofana zanakazo.
Tonga nanatanteraka izany avokoa ireo solontenan'ny sampandraraham-panjakana rehetra ato amin'ny Faritra, ny fikambanana sy ny mpianatra izay notarihin'ny Prefen’i Mahajanga Ravelomahay Lahiniaina Fitiavana.
Ny lohahevitra noraisina tamin'ity taona ity dia "Fambolen-kazo mahomby, antoka ho an'ny fihariana maharitra ara toe-karena".